ဖိနပ်၊ အိတ်များကဲ့သို့သောမည်သည့်ထုတ်ကုန်ကိုမဆိုအာရှမှတင်ပို့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်အာရှမှလာသော်လည်းအရည်အသွေးသည်ထူးခြားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရေကြောင်းပို့ဆောင်ချိန်သည်အပြိုင်အဆိုင်ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းမှာမတူနိုင်ပါ။
အခြားထုတ်ကုန်များ (ဥပမာ - တီရှပ်များ၊ ဆွယ်တာအင်္ကျီများ၊ hoodies၊ ဖုန်းအိတ်စသည်) သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများထံမှတိုက်ရိုက်တင်ပို့သည်။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု.
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုံးစံပုံနှိပ်ထုတ်ကုန်နှင့်အတူတင်ပို့နေကြသည် EMS Express!
အဓိကထုတ်ကုန်များ (တီရှပ်များ၊ ချွေးများ၊ ခေါင်းစွပ်များ၊ ဂျာကင်အင်္ကျီများ၊ ဦး ထုပ်များ၊ ပါးစပ်မျက်နှာဖုံးများ၊ ကျောပိုးအိတ်များ၊ လည်ဆွဲများ၊ လက်ကောက်များ၊ လက်စွပ်များ, ဖုန်းအိတ်များ)
ထုတ်လုပ်ချိန် - ၂-၄ ရက်
ယူအက်စ်၊ ယူကေ၊ အေအိုင်ဒီအက်စ်၊ အချိန်ကြာချိန်ခန့်မှန်းခြေ ၁၂-၂၅ ရက် (EMS ဦး တည်ရာခြေရာကောက်နှင့်အတူ)
US, UK, CA, AUS အဓိကကုန်ပစ္စည်းမှာယူမှုများမှာအမိန့်အပြည့်အစုံပြုလုပ်ပြီးရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်းမရောက်ရှိသေးပါ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပေးပို့ချိန်ခန့်မှန်းချက်များ - ၂-၄ ပတ် (အပြီးသတ်ခြေရာကောက်ခြင်းမပါ ၀ င်ပါ)
အမှာစာအပြောင်းအလဲပြုလုပ်ပြီးရက် ၆၀ အတွင်းမရောက်ရှိသေးသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမှာစာများသည်ငွေပြန်အမ်းခြင်းသို့မဟုတ်အခမဲ့ပြန်လည်တင်ပို့ခြင်းတို့အတွက်ရထိုက်သည်။
ပစ္စည်းပို့ရန်ကြာချိန်ခန့်မှန်းချက် - ၁၀-၁၄ ရက် (DHL Destination Tracking ဖြင့်)
အမှာစာအပြောင်းအလဲပြုလုပ်ပြီး (၄၅) ရက်အတွင်းမရောက်ရှိသေးသောမည်သည့်ခေါင်းအုံးမဆိုပြန်အမ်းငွေသို့မဟုတ်အခမဲ့ပြန်လည်တင်ပို့နိုင်သည်။
အထည် Tote အိတ်များ
ပေးပို့ချိန်ခန့်မှန်းချက် - ၁၀-၁၄ ရက် (DHL Destination Tracking နှင့်အတူ)
အမိန့်အပြောင်းအလဲပြုလုပ်ပြီး (၄၅) ရက်အတွင်းမရောက်ရှိသေးသောအထည်အလိပ်အမှာစာများသည်ငွေပြန်အမ်းခြင်းသို့မဟုတ်အခမဲ့ပြန်လည်တင်ပို့ခြင်းတို့အတွက်ရထိုက်သည်။
ယူအက်စ်၊ ယူကေ၊ CA၊ AUS ပေးပို့ချိန်ခန့်မှန်းချက် - ၁၀-၂၅ ရက် (EMS ကို ဦး တည်ရာလမ်းကြောင်းဖြင့်ခြေရာခံခြင်း)
US, UK, CA, AUS သင်္ဘောမှအမှာစာအပြည့်အစုံကိုလက်ခံရရှိပြီး ၄၅ ရက်အတွင်းမရောက်ရှိသေးပါ။
အမှာစာအပြောင်းအလဲပြုလုပ်ပြီးရက် ၆၀ အတွင်းမရောက်ရှိသေးသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသင်္ဘောသားများအမှာစာများသည်ငွေပြန်အမ်းခြင်းသို့မဟုတ်အခမဲ့ပြန်လည်တင်ပို့ခြင်းတို့အတွက်ရထိုက်သည်။
အမှာစာအပြောင်းအလဲပြုလုပ်ပြီး (၄၅) ရက်အတွင်းမရောက်ရှိသေးသောမည်သည့်အိတ်များမဆိုပြန်အမ်းငွေသို့မဟုတ်အခမဲ့ပြန်လည်တင်ပို့နိုင်သည်။
မည်သည့် ဖိနပ် အမိန့်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ 45 ရက်အတွင်းရောက်ရှိလာခဲ့မဟုတ်သောအမိန့်ပြန်အမ်းသို့မဟုတ်အခမဲ့ reshipment များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်ကြသည်။
Q: ကျွန်ုပ်၏အမိန့်များ (များ) တွင်သတင်းအချက်အလက်များကိုခြေရာခံခြင်းကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်ရရှိမည်နည်း။
ခေါင်းအုံးဖုံး: အမိန့်အပြောင်းအလဲနဲ့ပြီးနောက် 5-7 ရက်။
အ ၀ တ်အထည်အိတ်များ - အမှာယူပြီးနောက် ၅ ရက်မှ ၇ ရက်အကြား။
သင်္ဘောသားခြေအိတ်: 5-7 ရက်အမိန့်အပြောင်းအလဲနဲ့ပြီးနောက်။
သားရေတုတ်အိတ်များ - မှာယူပြီးနောက် ၇-၁၀ ရက်အတွင်း။
ပခုံးလက်ကိုင်အိတ်များ - အမှာအမိန့်ထုတ်ပြီးနောက် ၇-၁၀ ရက်။
ပတ္တူစကိတ်အိတ်များ - မှာယူပြီးနောက် ၇-၁၀ ရက်အတွင်း။
ပတ္တူဖိနပ်: အမိန့်အပြောင်းအလဲနဲ့ပြီးနောက် 7-10 ရက်။
အခြား: အမိန့်အပြောင်းအလဲနဲ့ပြီးနောက် 5-7 ရက်။
Q: Tracking Data သည်ကျွန်ုပ်၏ Tracking Number တွင်အဘယ်ကြောင့်မဖော်ပြသနည်း။
ယူအက်စ်အမှာစာအတွက်အချက်အလက်များကိုခြေရာခံရန်အမိန့်ကိုလုပ်ဆောင်ပြီးနောက် ၇ ရက်အထိကြာနိုင်သည်။ သင်မှန်သောခြေရာခံသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုနေသည်ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ www.17track.net/en.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမှာစာများအတွက်အချက်အလက်များကိုခြေရာခံရန်အမိန့်ကိုဆောင်ရွက်ပြီးနောက်တွင်ရက်ပေါင်း ၁၀ ရက်ခန့်ကြာနိုင်သည်။ သင်မှန်ကန်သောခြေရာခံခြင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသင်အသုံးပြုနေကြောင်းသေချာပါစေ။ www.17track.net/en။ အကြံပေးလိုပါကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမှာစာများသည်တစ်ကြိမ်တင်ပို့ပြီးပြန်အမ်းငွေမရနိုင်ပါ။
ကျနော်တို့တခုတခုအပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ကြသည် အားလုံး ရောင်းအားသည်နောက်ဆုံးမူဝါဒဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆုံး၌အမှားတစ်ခုမဟုတ်လျှင်သင်မှာယူမှုအတွက်ပြန်အမ်းငွေကိုပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ပြန်ပို့ခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းမပြုလုပ်နိုင်ပါ။
Q: ဖိနပ်ရဲ့အရွယ်အစားနဲ့အံ ၀ င်ခွင်ကျမကျပါဘူး။ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ?
ဖောက်သည်တစ် ဦး သည်သူတို့၏ဖိနပ်နှင့်မကိုက်ညီသောရှားပါးဖြစ်ရပ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်အတွက်တစ်ကြိမ်အခမဲ့ငွေလဲလှယ်ခြင်းကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။
အငြင်းပွားမှုများ sizing များအတွက်ပြန်အမ်းငွေထုတ်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်, လဲလှယ်ခွင့်ပြုထားသည်။
ဖိနပ်နှင့်မကိုက်ညီသည့်အကြောင်းပြချက် (ဆိုလိုသည်မှာသေးငယ်လွန်းသည်၊ ကြီးလွန်းလွန်းသည်)
အရွယ်အစားပြissuesနာများ၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်များစာမျက်နှာများအတွက်အရွယ်အစားဇယားများကိုပေးထားပါသည် ပတ္တူဖိနပ်, နောက်ခံဘွတ်ဖိနပ်.
မူလအမှာစာနှင့်အရွယ်အစား ၂ ခုထက် ပို၍ ကွဲပြားသောအရွယ်အစားလဲလှယ်ရေးတောင်းဆိုမှုသည်ဖောက်သည်များထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။ လဲလှယ်ရန်အရည်အချင်းမပြည့်မှီပါ။
မေး - ကျွန်တော့်လိပ်စာမတွေ့ဘူးလို့ပြောတယ်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစာတိုက်ကိုအသုံးပြုပြီးပို့ဆောင်ပါတယ်။ သင့်တွင် PO Box ရှိ၍ သင်၏физလိပ်စာအတိုင်းစာမရရှိပါက PO box ကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ အတည်ပြုချက်သည်တိကျသောအတိုကောက်များကိုလည်းလှည့်စားနိုင်သည်။ USPS.com သည်“ zip ကုဒ်နံပါတ်ကိုရှာသည်” ကသင်၏အတိုကောက်အတိုကောက်များနှင့် USPS မှသင်၏လိပ်စာကိုမည်သို့အတည်ပြုမည်ကိုရှာဖွေနိုင်သည်။
ဖြေ။ ။ အခုသင်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရှပ်အင်္ကျီတစ်ထည်ကိုလွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ပြီးလက်၏အောက်ခြေတွင်တိုင်းတာလျှင်သင်အတွက်အသုံးဝင်မည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဇယားတွင်အလွန်နီးကပ်သောအရာတစ်ခုခုကိုရှာတွေ့နိုင်သည်။ သတိရပါ၊ ဇယားပါတိုင်းတာမှုသည်ရှပ်အင်္ကျီအတွက်သာဖြစ်ပြီး၎င်းကိုဝတ်ဆင်ရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။
ဖြေ။ support@thekdom.com ပြီးတော့ပြtheနာကဘာလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ပါ။ ပြtheနာကိုဖြေရှင်းရန်သင်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်ပါမည် ကျေးဇူးပြု၍ သတိရပါ၊ ၎င်းတို့မှာပုံနှိပ်ထားသောတီရှပ်များဖြစ်သည်။ ပုံနှိပ်ပြီးတာနဲ့ငါတို့သူတို့ကို un- ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသို့မဟုတ်သိုလှောင်သို့ပြန်ပို့လို့မရပါဘူး။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ ၀ ယ်ယူမှုအပေါ်ကျေနပ်မှုရှိစေရန်တစ်ခုခုပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားပါမည်။
ပြန်အမ်းငွေကိုသေချာစေရန်ဆုံးဖြတ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ရှပ်အင်္ကျီ၏မူလစျေးနှုန်းအတွက်အမြန်ဆုံးပြန်အမ်းမည်။ ငွေပြန်အမ်းခြင်းများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ပေးပြီးသည်နှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန် ၁-၃ ရက်ကြာသည်။ သင်ဖလှယ်လိုပါကပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်းအတွက်ငွေပေးချေမှုအချက်အလက်များထည့်သွင်းပါ။
A: အချို့သောရှပ်အင်္ကျီများသည်ပုံနှိပ်ခြင်းမပြုလုပ်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါသည်။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ သင်ကရှပ်အင်္ကျီကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆေးကြောမယ်။
Q: မင်းရဲ့အမိန့်မှာမှားယွင်းမှုတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ ဖြေရှင်းနည်းကားအဘယ်နည်း။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့အရမ်းဝမ်းနည်းပါတယ်။ မကြာခဏဖြစ်ပျက်ခြင်းမရှိသော်လည်းဘယ်သူမှမပြီးပြည့်စုံပါဘူး။ အီးမေးလ် support@thekdom.com ငါတို့သည်သင်တို့မှန်ကန်စွာလုပ်ဖို့သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ များသောအားဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်မိသောအမှားပုံကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့ရန်သာလိုအပ်သည်။ (က) သင်၏ပြောဆိုချက်ကိုအတည်ပြုနိုင်ပြီး (ခ) သင့်အားအမှားပြင်ရန်ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။
မေး။ ။ ပစ္စည်း ၂- ခုကိုမှာထားတယ်၊ တစ်လုံးပဲရတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်သိုလှောင်ထားခြင်းမရှိသည့်ထုတ်ကုန်များစွာရှိသည် အိမ်။ ဒါကြောင့်တစ်ချိန်တည်းမှာပစ္စည်းများစွာကိုသင်မှာယူတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာသီးခြားစီတင်ပို့မှာဖြစ်ပြီးသူတို့ကသင့်ဆီကိုမြန်မြန်ရောက်နိုင်မှာပါ။ သင်သည်နောက်တစ်ခုမတိုင်မီသင်ပစ္စည်းတစ်ခုရကောင်းရနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏ပစ္စည်းများအားလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းမရရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ထိတ်လန့်ခြင်းမရှိကြပါနှင့်။ သူတို့သည်လမ်းပေါ်တွင်ရှိနေကြောင်းသတိရပါ။
ငါတို့ကိုလူသိများတဲ့ E-Commerce ပလက်ဖောင်း Shopify ကလုံခြုံစေသည်။ လုံခြုံစိတ်ချရသောစစ်ဆေးမှုကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အာမခံပါသည်။ ငွေပေးချေမှုများကို Shopify မှတစ်ဆင့်အောက်ဖော်ပြပါပုံတွင်ဖော်ပြထားသောအဓိကကဒ်ကုမ္ပဏီများမှဆောင်ရွက်သည်။ သင်သို့မဟုတ်သင်၏ကဒ်နှင့်ပတ်သက်သည့်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမှကျွန်ုပ်တို့မရရှိနိုင်ပါ။